Xildhibaano badan oo saf ugu jira la kulanka Ra’isul Wasaaraha cusub iyo ujeedka keenay | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Xildhibaano badan oo saf ugu jira la kulanka Ra’isul Wasaaraha cusub iyo...
Xildhibaano badan oo saf ugu jira la kulanka Ra’isul Wasaaraha cusub iyo ujeedka keenay
Qaar kamid ah Xildhibaanada golaha shacabka ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa saf u galay aragtida iyo la kulanka Ra’isul Wasaaraha magacaaban ee aan wali helin codka Klasoonida Golaha Shacabka Eng Maxamed Xuseen Rooble.
Sida aan wararka ku helnay Xildhibaanadan qaarkood u tagay halka kuwa kalana la kulankiisa saf ugu jiraan Ra’isul Wasaaraha magacaaban ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa damac weyn ugu jira in ay kamid noqdaan golaha Wasiirada.
Xildhibaanadan qaarkood ayaa u muujiyay Ra’isul Wasaaraha cusub taageero iyo garab istaag, waxa ayna taa badalkeeda u dhiibayeen fariin ah in fiiro gaar ah u yeesho kuna daro golaha Wasiirada.
Waxaa sidii kale jira Xildhibaano aaminsan in Ra’isul Wasaaraha cusub uusan awood badan iyo saameyn muuqataba ku laheyn magacaabista golaha Wasiirada, waxa ayna taa badalkeeda u tageen Madaxweyne Farmaajo iyaga ka codsanayay in Wasiirada lagu daro.
Golaha Wasiirada cusub ee la filayo Ra’isul Wasaare Rooble in uu soo magacaabo marka uu kalsoonida helo ayaa u badnaan doona wasiirada hada shaqeeya marka laga reebo in xilalkooda weyn doonaan Wasiiradii saaxiibada dhaw la ahaa Kheyre .
Previous articleAdeegsiga Xijaabada fashionka oo adduun lacageed badan soo kordhinaya
Next articleSaddexdan sheeko iyo xalka siyaasadeed ee maanta sidee isu qabtaan?
Khadiija iyo Mahad Cawad oo lagu eedeeyey inay guri ka haystaan ilmaha Jeneral Maxamed Abshir Muuse
Erayga “Madaxweyne” in laga tanaasulo maxay ka qabaan madaxda maamul-goboleedyada?
Wasiir Beyle” Waxaan ku jirnaa Imtixaan”& qorshaha deynta Cafinta Somalia
SAWIRO:Banaanbax ka dhan ah Dowlada Somalia oo ka Socda Magaalada Kismaayo
C/samad Macalin Maxamuud & R/W Khayre oo kulan uga socdo Villa Somalia
DAAWO:Shaqsiyaad katirsan xukumada Kheyre iyo xildhibaano oo boobay guri Muqdisho kulahaa shaqsi katirsan….
Wararkii ugu dambeeyey kulamada siyaasiyiinta Soomaalida ee Nairobi iyo xulufo la dhisayo